ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၂၃. ၁. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(က)-လယ်ယာမြေထောက်ပံ့ကြေးနည်းပါးစွာရရှိခဲ့သူများအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာမြေကွက်များ ဖော်ထုတ်ရောင်းချပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-ကညင်ကောက်-ဒါးက လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအား အပြီးဖျက်သိမ်း၍ လယ်ယာမြေများ ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ပြီး မူလတောင်သူများအား ပြန်လည်ချထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ဂ)-ဆင်ခြေရာကျေးရွာအုပ်စုနှင့် သင်္ကန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စုတွင်ရှိသော သာပေါင်းစက္ကူစက်ရုံမှ သိမ်းဆည်းထားသော သင်္ကန်းလေးဆားကွင်းအား မူလပိုင်ရှင်လယ်သမားများက တရားဝင်ပုံစံ (၇) နှင့် အညီရရှိအောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဃ)-နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ယူဝရပ်ကွက်ရှိ မူလတန်းကျောင်းဝန်းဧရိယာအား သိုင်ယောင်းချောင်းရေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ်းထိန်းနံရံတည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း အဆောက်အဦသည် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အဦအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေတ်မီ မြန်မာ့စာတိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အဆောက်အဦအသစ်တစ်လုံးကို အမြန်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(စ)-ထားဝယ်-မြိတ် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သွားသော မြေယာများအတွက် မြေယာ လျော်ကြေး ပေးအပ်ရန် မူလလက်ရှိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်‌့ တောင်သူလယ်သမားများလက်သို့ ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ သင်္ဘောဆိုက်ကပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားနေ၍ ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ သွင်းကုန်များ ဈေးကြီးမြင့်စေခြင်းတို့ ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် သင်္ဘောဆိုက်ကပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း